Omeo fialamboly aho dia natsangana tamin'ny taona 2017 miaraka amin'ny tanjona hitondra ny fanadihadiana sy ny vaovao farany an'ny tontolon'ny sarimihetsika ho an'ireo mpampiasa Internet. Eto ianao dia hahita lahatsoratra be dia be momba ny sarimihetsika amin'ny lohahevitra rehetra, ary koa ny tontolon'ny mozika. From tantara mozika, fanomezam-boninahitra mozika, mandalo ny vaovao farany avy amin'ireo vondrona manan-danja indrindra amin'izao androntsika izao sy ireo teo aloha.
Ireo lahatsoratra rehetra ireo dia novokarin'ny ekipanay mpanoratra mahafinaritra, izay hitanao eto ambany. Raha te hanatevin-daharana azy ireo ianao dia afaka mifandray aminay ny endrika manaraka. Raha, etsy ankilany, te-hahita ny lisitr'ireo lohahevitra voarakitra ao amin'ilay tranokala ianao ary voalamina isaky ny sokajy dia afaka mitsidika ianao ity pejy ity.
Tiako ny sarimihetsika sy mozika. Mitandrina foana amin'ny famoahana vaovao aho, na amin'ny Internet, na amin'ny magazine, ... na inona na inona! Ny iray amin'ireo kasaiko tsara indrindra dia ny mandany tolak'andro kamo miaraka amin'ny olon-tianao ... Io no tsara indrindra. Ary tiako koa ny manoratra sy mizara izay rehetra azoko atao momba izay mitranga eo amin'ny tontolon'ny fialamboly.